I-china Heavy-Duty Industrial yokuhlanza indwangu abakhiqizi nabaphakeli | Bei Te
Yenzelwe imisebenzi yokusula umsebenzi ophakathi, ikakhulukazi lapho ukumunca kuyisihluthulelo.
Imunca uwoyela namanzi ngokushesha okuphindwe ka-3-5 kunezindwangu eziwashiwe. Ngisho noma imanzi, ihlala iqinile futhi igcina ukwakheka kwayo, ihola indlela yokungena, inhloso yethu ukukuxhasa ekwenzeni ngcono ukukhiqiza nokusebenza kahle ngenkathi unciphisa udoti ngokuletha indwangu ehlanzekile, ethembekile futhi evuselelekayo. Iphelele ekusetshenzisweni kwezimboni.
Ukwakhiwa: i-woodpulp + Polyester
Umbala: Okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe
usayizi weshidi: 34cm * 23cm * 500pcs / roll, 2rolls / ctn.
Ukwakhiwa: 70% Viscose + 30% PET
Isisindo: 68gsm, 75gsm
1, Inqubo ehlukanisiwe yobuchwepheshe benqubo ehlanganisiwe
I-2, i-lint dust engezansi kanye nokumelana kwe-organic solvent.
3, Amanzi aphezulu ne-Oyili absorbency.
4, Akuqukethe okunamathelayo, okunamathiselwayo noma okuhlanganayo.
5, ukuthungwa okuthambile (Plain): ngeke kulimaze ubuso.
I-6, ukwakhiwa kwe-Roller, okulula kakhulu ukuthatha nokuhlanza. Incazelo yekhasimende iyatholakala.
* Ama-Wipe aqinile, anezintwana eziphansi enzelwe ukuhlanzwa okusetshenziswa okuphindwayo ngamakhemikhali nokuxazululwa
* Ukusula ukusebenza okuphezulu kuklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo zemisebenzi enzima kakhulu nezindawo ezibucayi kakhulu
* Amakhemikhali amelana nama-acid kanye ne-caustics; ingasetshenziswa ngama-solvents noma ama-sanitizers asuselwa emanzini asetshenziselwa ukusula nokulungisa izindawo
* Ama-wipes ahle kakhulu emisebenzini yokulungiselela ekhethekile lapho i-lint ephansi nokusetshenziswa okuncane kwamakhemikhali kubalulekile; ekahle ukuphrinta, ukufaka ngopende ngamunye, ukukhiqizwa kwengilazi nezinto zokusebenza, ukuhlangana / ukulungiswa kwenjini
* Ukusulwa okunemisebenzi eminingi kuhle ekusuleni uwoyela, izinto zokuthambisa kanye namafutha
* Ama-Wipes ngeke aqede umbala futhi asize ukufihla ukungcola nokungcola; enhle kakhulu ezindaweni zokukhiqiza nezezezimboni
* Iroli ekhishwa kalula ingasetshenziswa neRoll Dispenser
Ukuhlanzela idivayisi yezokwelapha, indawo yokusebenza, i-semiconductor / i-TFT / i-LCD / i-PCB / i-SMT umugqa wokukhiqiza wokucubungula ku-cleanroom.
Ukusula izinsiza ze-smudge ezisindayo nezakhi.
Ukugcinwa kwemishini kulayini wokukhiqiza
Ukugcina imikhiqizo kagesi.
Ukwelashwa ngaphezulu nge-solvents.
Ukugcina nokunakekela amathuluzi emishini nemishini emikhulu
Isula ingilazi nezinsimbi ezahlukahlukene.
Ukuhlanza ama-stencils, izingxenye, i-optical nezinye izinhlelo eziningi ezijwayelekile
Langaphambilini I-wiper engu-0609 yokuhlanza
Olandelayo: I-SMT Stencil wiper roll